Beesha caalamka oo baaq u dirtay hoggaanka Soomaalida | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Beesha caalamka oo baaq u dirtay hoggaanka Soomaalida
Beesha caalamka oo baaq u dirtay hoggaanka Soomaalida
Xubnaha beesha Caalamka ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda dhexe iyo maamullada Soomaaliya inay gaaraan heshiis doorashada lagu hagi karo.
War kasoo baxay Caalamka ayaa dowladda dhexe looga dalbaday in doorashada ay ku qabato heshiis iyo Wada ogol.
Warka kasoo baxay Xubnaha beesha Caalamka ayaa lagu Yiri Iyadoo ay Soomaalidu u diyaar garoobayaan soo dhaweynta Bisha Barakeysan ee Ramadaan, Beesha Caalamigu waxay muujinayaan rajo ah in mabaadi’da aasaasiga ah ee milicsiga, dulqaadka, Iscafinta iyo dib-u-heshiisiintu ay u horseedi doonaan guul shir madaxeed oo ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka.
Waxay Xuseen muhiimadda uu leeyahay Shir-madaxeedka la qorsheeyay ee DFS-DXDF, Saaxiibada Caalamku waxay ku boorriyeen in wada hadalakaan ay hormuudka ka tahay Soomaalida isla markaana ay Soomaali leedahay uu horseed u noqon doono xallinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la oggolaado hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka ee 17 Sebtember. Heshiiska noocan oo kale ah, oo astaan u ah midnimada, u damqashada iyo daryeelida dadka kale, wuxuu muujinayaa hoggaan iyo danayn ummadda Soomaaliyeed isla markaana waxuu u noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed.
Waxay ku boorriyeen madaxda DFS iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay fursaddan u adeegsadaan inay ku xalliyaan khilaafaadkooda oo ay sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo,waqtigeeda, iyo si nabad ah ku qabsoomi karta iyadoo aan dib-u-dhac dambe ku imaan si loogu oggolaado Soomaaliya inay horay u socoto.
Next articleCabdulqaadir Maxamad Yuusuf Xaaji oo noqonaya senetarka Garissa